निर्मलालाई न्याय कसले र कसरी दिने ? « Nepal'S Largest Digital Online Newspaper (Magazine)
निर्मलालाई न्याय कसले र कसरी दिने ?
निर्मला पन्त यो नाम नसुन्ने नेपालमा सक्भर कोहि हुनुहुन्न । नेपालमा कुनै गरिब, असहायलाई न्याय पाउन कति गाह्रो छ भन्ने प्रतीक हो यो नाम। यो नाम कुनै ब्यक्तिले राखे तर यसको परिभाषा भने नेपालको कानूनी प्रशासन र कथित सभ्य समाजले दिएको छ।
बिगत दुई बर्षदेखि निर्मलालाई न्यायको स्वर निरन्तररूपमा उठेको छ। आज सामाजिक सञ्जालमा फेरिपनि यो आवाज सुनिन्छ। निर्मलालाई न्याय माग्नु अघि हामीले उनको दोषी चिन्न जरुरी छ। निर्मलाको दोषी उसलाई यस्तो घृणित काम गर्ने ब्यक्तिमात्र हैन, नेपालको कानून र समाज पनि हो। हामीले यो कुरा बुजेर अब प्रायस्चित गर्नुपर्छ।
हो निर्मलाको दोषीलाई हदैसम्मको सजाय दिए, निर्मलालाई न्याय हुन्छ। यो कुरामा सबैले सकेसम्म दबाब दिईरहेका छौँ। तर के निर्मलाको दोषीलाई सजाय दिएरमात्र उसलाई न्याय हुन्छ त ? के भोलि कोहि अन्य दिदिबहिनीलाई निर्मला बन्नबाट रोक्नु पनि निर्मलालाई न्याय हैन ? के बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधलाई जरैदेखि हटाउनु पनि निर्मलालाई न्याय हैन ?
निर्मलाको दोषीलाई पक्रने कानूनी प्रशासनको काम हो यसमा हामीले दिनसक्ने दबाब मात्र हो। तर बलात्कार जरैदेखि हटाउन भने कानूनसङै हामीले पनि धेरै ठुलो भुमिका खेल्न सक्छौ। यो विषयमा माइतीघर मन्डला र फेस्बुकमा भएको आक्रोश ठिक छ तर पर्याप्त छैन।
दुई बर्ष अगाडि जब निर्मलाको केस आएको थियो तबपनि आक्रोश यतिकै थियो तर बलात्कारको घटना भने कम भएन। नेपालमा गएको बर्षमात्र १६-१७ सय बलात्कारको घटना रिपोर्ट भएको थियो। अझ धेरै त बाहिर आउन पनि सक्दैन। विश्वमा बलात्कारको तथ्यांक हेर्ने हो भने ९० प्रतिशत घटना बाहिर आउन सक्दैन। यो तथ्यांक नेपालमा पनि धेरै हदसम्म लागू हुन्छ। बाहिर देखिएको भन्दा भित्र यो अपराध कयौं गुणा डरलाग्दो छ।
यस्ता घटनालाई कम गर्न हाम्रो यो आक्रोश नेपालको कानूनमा झल्काउनुपर्छ। बलात्कारको घटनामा दोषीलाई अझै कठोरभन्दा कठोर कानून बनाउने र निर्मलाको जस्तो केसमा बलात्कारीलाई फासी हुनुपर्छ। यो सङै नेपालको कानूनी प्रशासन जस्तै नेपाल पुलिस, सिआईबीको यस्तो घटनाको जाँचमा निकै सुधार आउनु आवश्यक छ।
वहाँहरुले घटनाको छिटोभन्दा छिटो छानबिन गर्ने, पीडितको पहिचान गोप्य राख्ने र कसैको दबाबमा नपरी आफ्नो काम इमानदारीपुर्बक गर्नुपर्छ। अगाडिका कुराहरु लागू गर्न हामीले सम्बन्धित ब्यक्तिलाई अहिले जस्तै दबाब दिईराख्न जरुरी छ। नेपालमा अहिलेपनि कति मान्छेलाई महिला हिंसा र बलात्कारका विरुद्ध भएको कानून थाहा छैन। तेस्ता मन्छेलाई हामीले कानूनको ज्ञान दिनुपर्छ। योसंगै हामीले समाजको सोच पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ।
समाजलाई हेर्दा एउटा कुरो मलाई अचम्म लाग्छ। समाजले छोराहरुलाई धेरै छुट दिदा छोरीहरुलाई भने धेरै रोक लगाउछ। अनि जब तिनै छोराबाट छोरीहरु सिकार हुन्छन् तब पनि दोष छोरीलाई नै लगाउन खोजिन्छ। छोराको नियतभन्दा बढी छोरीको चरित्र र इज्जत माथी प्रश्न उठ्छ। यो कुरालाई समाजबाट हटाउन हामीले विभिन्न जागरुक्ताका कार्यक्रम गर्न सकिन्छ। यस्ता कार्यक्रम गर्न युवा जोश लागेनै समाजमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ। युवासङै समाजका पढेलेखेका अन्य ब्यक्ती लागे बलात्कार जस्ता अपराधलाई जरैदेखि हटाउन सकिन्छ।
भविस्यमा यस्ता घटना कम गराउन हामीले अन्य बोल्ड निर्णय लिन आवश्यक छ। सर्वप्रथम हामी छोराहरु सुरुमा राम्रो बन्नुपर्छ। हामीले कुनै महिलाप्रती दुर्व्यवहार गर्न त भएन नै कहिकतै यस्तो भएको देखे त्यसलाई रोक्नुपर्छ। भोलि बलात्कार गर्ने छ्यमता भएको ब्यक्तिले आज कहि न कहि, कुनै न कुनै रूपमा संकेत दिइरहेको हुन्छ।
हामीले त्यो बुजेर तेस्ता ब्यक्तीलाई सम्झाउने, हप्काउने र परे तह लगाउन पछी पर्नु हुदैन। समाजमा यस्ता घटना हुने, ब्यक्तिको यौन चाहनाले पनि हो। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नेपालमा वेश्यालय कनूनी रूपमा संचालित हुन जरुरी छ। यसले केही हदसम्म यस्ता घटना रोक्न भूमिका खेल्छ। यो सङै बिद्यालयमा यौन शिक्षाको बारेमा पढाई हुनु आवश्यक छ। अठार बर्ष काटेका विद्यार्थीलाई यौनको बारेमा सचेत बनाई त्यसका नकारात्मक सोचबाट टाढा राख्नुपर्छ। परिवार, समाज र बिद्यालयले ब्यक्तिको सोचमा ठुलो प्रभाव पार्छ। महिला हिंसा र बलात्कार हटाउन इनिहरुबाट ठुलो बहससङै उधार विचारको बिकास हुन आबश्यक छ।
अगाडिका उपायसङै हामीले दिदीबहिनीलाई यस्तो घटनाबाट बचाउन आत्म-रक्षाको सीप सिकाउन सकिन्छ। ५-१० बर्षको बालबालिकालाई गूड् टच् , ब्याड टच् का बारेमा ज्ञान दिने, १० देखि बढी उमेरका छोरीहरुलाई करातेँ, तेक्वान्दोका आत्म रक्षाको लागि चाहिने सीप सिकाउन सकिन्छ।
निर्मला घटनामा हामी जनताले दिनसक्ने भनेको दबाब मात्र हो। तर अन्य हजारौं निर्मलालाई बचाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो र त्यसरी नै हामीले निर्मलालाई न्याय दिनसक्छौ। यी परिवर्तन कुनै एकलैको पहलले नभई सबै मिले मात्र सम्भव छ। यसको सुरुवात जनस्तरमा ठुलो बहसबाट हुन सक्छ। हामीले यी उपायहरु लागू गर्न सके कोहि अन्य दिदीबहिनी निर्मला बन्न पर्दैन।
बिनोद राज सुवेदी (नेपाल ल क्याम्पसमा कानून अध्यनरत विद्यार्थी हुन्)
प्रकाशित मिति : भाद्र २३, २०७७ मंगलबार ९ : २३ बजे